✍️: टिभी अन्नपूर्ण	 🕒 प्रकाशित: २०७८ आश्विन २, शनिबार १९:१९
नेकपा माओवादीका नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संसद चल्यो भने नेकपा एमलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीति सकिने भएकोले संसद चल्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । उनले अबको केही दिनमै होलिडे खुलेर बजेट पारित हुने बताए । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार असफल नभएको बताए ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा भएको कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्री देउवाले केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर राम्रो काम गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री देउवाले ६६ दिनमा कोभिड १९ को उपचारमा तीव्रता दिनुभएको समेत बताए । उनले गठबन्धनको सरकार भएकोले एमसीसी नेपालको हित हुनेगरी एमसीसी पारित हुने बताए । उनले एमसीसी संसदमा आउन आवश्यक नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
नेता बिडारीले भने, ‘संसद चल्यो भने ओलीजीको राजनीति सिद्धियो, त्यसैले चल्न नदिन विभिन्न चलखेल भइरहेको छ, के गर्दा चल्दैन, के गर्दा गडबढ भइरहन्छ, उहाँले त्यही गर्नुहुन्छ, संसारमा यो कहाँको चलन हो, मर्यादापालकको टाउकोमा चढेर, टोकेर, सभामुखको टाउकोमा हान्ने हाम्रो षड्यन्त्र थियो, सांसद नेकपा एमाले ? कस्तो हो ? अर्को कुरा अध्यादेश ल्यायो होलिडे भयो, होलिडे भएर के भएको छ, क्यामेरा बन्द भएको छ ? बजेट होलिडे भएर कसैको केही काम रोकिएका छन् ? अब केही दिनमा होलिड खुल्छ,बजेट पारित हुन्छ, सबै काम भइरहेका छन्, प्रधानमन्त्री देउवाले ६६ दिनमा गर्नेजति काम गर्नुभयो, किनभने यो ६६ दिनमा कति काम गर्छन् ? एमसीसीको बारेमा अहिले धेरै चर्चा भइरहेको छ, यो नेपालको हीतमा हुनेगरी देउवाजीले पास गर्नुहुन्छ र अर्को कुरा एमसीसी संसदमा ल्याइनु हुँदैन ।’